I-Sendgine: Hlela Izitimela Zakho Zokucabanga | Martech Zone
NgoLwesithathu, Januwari 23, 2013 NgoLwesithathu, Januwari 23, 2013 Douglas Karr
Uma ubhajwe ezintabeni ze-imeyili njengami, kungaba nethemba. I-Sendgine ihlanganisa ukusebenziseka kalula esikulindele kusuka ku-imeyili namakhono wenhlangano akhuliswe yizinhlelo zokuphathwa kwephrojekthi, enikeza abasebenzisi ipulatifomu esuselwa kuwebhu enakho konke abakudingayo ukwenza ukusebenzisana kube impumelelo.
Esikhundleni sokuphatha amaphrojekthi, u-Sendgine wethula Izitimela Zokucabanga, lapho amafayela, imilayezo, imicimbi nezinto ezizokwenziwa zigeleza ndawonye zibheke kumgomo othile. Ipulatifomu ivumela abasebenzisi ukuthi balethe amafayela amakhulu ngaphakathi nakwezinye izinhlelo zokusebenza zefu ezifana neDropbox ne-Facebook kalula.
Ngaphakathi kwesitimela ngasinye, abasebenzisi bangazisusa ezingxoxweni, bavale izaziso ze-imeyili nezamaselula ngesici esiyisimungulu, noma baqondise izaziso zemiyalezo kubantu abathile abanesici sokuthula, baqede imfuhlumfuhlu yebhokisi lokungenayo. I-Sendgine ibuye yonge isikhathi, indawo yedrayivu nokusetshenziswa kwedatha yeselula ngokuvumela abasebenzisi ukuthi babuke amafayela ngokuchofoza okukodwa futhi babuke kuqala imibhalo ngaphandle kokuyilanda.
Amafayela nemiyalezo ku-Sendgine ingagcinwa futhi ithunyelwe ngokuvikelwa “okuphephile +”. Lesi sici sinikeza izici zobumfihlo ezingeziwe ezingatholakali ngokujwayelekile nge-imeyili ngokuhlanganisa ukubethela kokuphumula nemikhawulo kulwazi olukhonjiswe kuzaziso ze-imeyili.
I-Sendgine inikeza okubhaliselwe kwamahhala nokukhokhelwayo. Ngohlelo lwamahhala, amalungu aqala ngezitimela zamahhala ezintathu njalo ngenyanga futhi athola Izitimela zamahhala ezengeziwe zomsebenzisi ngamunye omusha ohamba ngamabhodi (kufika ku-20 Izitimela zamahhala ngenyanga). Izinhlelo zobulungu zisukela ku- $ 8 ngenyanga (Lite Plan) ziye ku- $ 19 ngenyanga (Pro Plan). Ku-Pro Plan, abasebenzisi bangaqala inani elingenamkhawulo lezitimela.
Tags: ukusebenzisana nge-imeyilisendgine